.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: ပုန်းညက်ဖြူ – ရွှေဧည့်သည် Album
ပုန်းညက်ဖြူ – ရွှေဧည့်သည် Album လေးကို တောင်းဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းရေ တင်ပေးလိုက်ပါပြီနော်။ အလှူသီချင်းတွေ ၊
ဆိုင်းသီချင်းလေးတွေဆိုတော့ နားထောင်ရတာ စိတ်ထဲမှာ ကြည်ကြည်နူးနူးလေး ခံစားရပါတယ်။ သူငယ်ချင်း လိုချင်တဲ့
သီချင်းလေးတွေကို အောက်မှာ လိုင်းပေါ်မှာတင် နားထောင်နိုင်သလို ဒေါင်းယူလို့လည်း ရပါပြီ။ အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
မှတ်ချက်။ ။ သီချင်းတွေကို ဒေါင်းမယ်ဆိုရင် သီချင်းလင့်ကို Right Click >> Save Link As.. ကို နှိပ်ပါ။
1 အလှပန်းတစ်ပွင့် ပုန်းညက်ဖြူ Click Here !! 2.20 MB
2 ပွဲဦးအစရဲ့ပတ်မချီသံ နီလာလွင် Click Here !! 1.60 MB
3 ရွှေဧည့်သည် ပုန်းညက်ဖြူ Click Here !! 2.50 MB
4 ခေတ်လိုနှောတဲ့ဗျောသံ ပုန်းညက်ဖြူ Click Here !! 2.10 MB
5 တို့အလှူကတော့လန်းတယ် ပုန်းညက်ဖြူ Click Here !! 3.20 MB
6 ကျောင်းသူမလေးပုန်းညက်ဖြူ ပုန်းညက်ဖြူ Click Here !! 1.80 MB
7 မမနှဲလေးကိုမေးကြည့်ပါ ပုန်းညက်ဖြူ Click Here !! 2.60 MB
8 ဗုံချစ်သူ ပုန်းညက်ဖြူ Click Here !! 2.50 MB
9 ပုန်းညက်ဖြူနဲ့လှူကုန်ပြီ ပုန်းညက်ဖြူ Click Here !! 2.10 MB
10 ပုန်းညက်ဖြူအသည်းခွဲပြချင်တယ် ပုန်းညက်ဖြူ Click Here !! 2.50 MB
11 အလှူတော်ကြီးအောင်မြင်ပြီ နီလာလွင် Click Here !! 1.80 MB
Posted by Thurainlin at 08:17